I-Apple yokwakha iziko ledatha elitsha eDenmark | IPhone iindaba
I-Apple yokwakha iziko ledatha elitsha eDenmark
I-Apple iceba ukutyala imali kwakhona eDenmark ukwakha iziko ledatha elitsha elizweni, iziko ledatha eliza kuxhotyiswa ngamandla ahlaziyekayo. Olu lwazi lubhengezwe ngumphathiswa wezendalo kwaye emva koko lwenziwe iqinisekisile kwiReuters ngentloko yeApple kweli lizwe, uErik Stannow.
Eli iya kuba liziko ledatha lesibini elakhiwa ngu-Apple kweli lizwe. Eyokuqala ibekwe eViborg, kodwa ayizukusebenza de kuphele lo nyaka. Iziko ledatha elitsha liza kwakhiwa eAabenraa, kufutshane nomda waseJamani malunga neekhilomitha ezingama-200 emazantsi eViborg.
Umhla ekulindeleke ukuba eli ziko ledatha litsha lifike kwi-intanethi yikota yesibini ye-2019, nangona kunjalo Ukwazi ukucotha kunye nokubonakala kwe-Apple xa usakha nantoni naKusenokwenzeka ukuba imisebenzi ayizukugqitywa de kube sekupheleni kuka-2020 okanye ekuqaleni kuka-2021. Eli ziko ledatha litsha liya kuba noxanduva lokulawula iqonga lemiyalezo ye-Apple, iSiri, iiMephu zeApple kunye neVenkile ye App kubo bonke abasebenzisi uninzi lweYurophu.
Kubonakala ngathi kwi IDenmark iyalwamkela olu hlobo lotyalo-mali ivelisa inani elikhulu lemisebenzi, hayi ngexesha lokwakha kuphela kodwa naxa iqalisa ukusebenza. Nangona kunjalo, eIreland, ngakumbi eAthenry, iApple ibisusela ngo-2015 uthetha-thethwano ngokwakhiwa kweziko ledatha elitsha elizweni, ulwakhiwo oluya kuxabisa i-Apple $ 900 yezigidi.
Iziko ledatha elitsha ngoku ikhubazekile yinkundla elinde ukubala ukonakaliswa kwendalo esingabangelwa kukufakwa kweziko ledatha, iziko ledatha ekulindeleke ukuba umhla wokuvula kulindeleke ukuba uqale kulo nyaka.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » Izaziso » I-Apple yokwakha iziko ledatha elitsha eDenmark
Iqonga lokuthumela imiyalezo kuGoogle Allo lizakwazisa inkonzo yewebhu kwiikhompyuter